Hojeren’i Okraina Indray Ny Fiarovana Antserasera Taorian’ny Fanafihan’ny Rosiana Ny Seranam-piaramanidina Lehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2016 15:01 GMT
Ny seranam-piaramanidina Boryspil ao amin'ny renivohitra Kyiv ao Okraina no kinendrin’ ny fanafihan'ny mpijirika, nilaza ny manampahefana fa avy ao Rosia izy ireo. Sary tao amin'ny Wikimedia Commons.
Nametraka fotoana handinihana indray ny rafi-piarovana sy ny fiarovana antserasera ao amin'ny firenena ny manam-pahefana ao Okraina, anisan'izany ireo ao amin'ny seranam-piaramanidina sy ny garan'ny fiaran-dalamby, taorian'ny fanafihan'ny rindrambaiko mpisompatra nitranga vao haingana tao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Kyiv, Boryspil, izay nikendry ny rafitra fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka. Mihevitra ny minisiteran'ny fiarovana Okrainiana fa natao tamin'ny alalan'ny lohamilina ao Rosia ny fanafihana.
Tamin'ny herinandro lasa teo dia tsikaritra tao amin'ny solosaina ao amin'ny tambajotra informatikan'ny seranam-piaramanidina Boryspil, habaka fihaonambe ara-pitaterana mampifandray an'i Okraina amin’ izao tontolo izao, ny rindrambaiko mpisompatra mitovy amin'ilay nampiasaina tamin'ny fanafihana ny orinasan'ny herinaratra Okrainiana tamin'ny volana Desambra 2015
Nilaza i Irina Kustovska, mpitondra tenin'ny minisiteran'ny foto-drafitrasa ao Okraina izay manara-maso ny seranam-piaramanidina, ny lalamby, sy ny tambajotram-pitaterana hafa fa mikasa hanomboka hijery indray ireo tahirin-kevitra miady amin'ny viriosy (anti-virus) ao amin'ny seranam-piaramanidina Boryspil sy ao amin'ny orinasa hafa iandraketany ry zareo.
Nandritra ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 16 Janoary, nanambara ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Fiarovana, Andriy Lysenko fa nahita tobim-piasana tratran'ny rindrambaiko mpisompatra BlackEnergy, mifandray amin'ny fanafihana aterineto vao haingana tao Okraina, tao amin'ny seranam-piaramanidina ireo manampahaizana ara-piarovana antseraseran'ny fanjakana. Navahan'ireo manam-pahaizana tsy hiaraka amin'ny hafa ny sosolaina lasibatra tao amin'ny tambajotra informatikan'ny seranam-piaramanidina.
“Ny foibem-pifehezana ny lohamilina izay nivian'ny fanafihana, dia ao Rosia,” hoy i Lysenko tamin'ny sampam-pampahalalam-baovao Reuters, nampiany hoe hita mialoha ny rindrambaiko mpisompatra tao amin'ny rafitra Boryspil ary tsy nisy ny fahavoazana vitany. Tao anatin’ izany, tsy nanonona ny governemanta Rosiana tao anatin'ny fanambaran'izy ireo momba izany ny manam-pahefana Okrainiana.
Efa nanome tsiny an'i Rosia ny sampam-piarovam-panjakana ao Okraina noho ny fahatapahan-jiro tao amin'ny faritra Ivano-Frankivsk andrefan'i Okraina tamin'ny 23 Desambra izay niantraika tamin'ny olom-pirenena teo amin'ny 80.000 teo. Tamin'izany fotoana izany, nitatitra ny orinasan'ny herinaratra iray ao an-toerana, PrykarpattyaOblenergo fa tapaka jiro nandritra ny enina ora mahery ny tao amin'ny ampahan'ny faritra iasany, anisan'izany renivohi-paritra Ivano-Frankivsk, noho ny “fifanindriana” tao amin'ny rafi-panaraha-mason'ny orinasa. Nampifandraisin'ny ekipan'ny mpikaroka ara-piarovana an-tserasera iSIGHT Partners tamin'ny fikambanan'ny Rosiana mpijirika fantatra amin'ny hoe Ekipa Sandworm (Kakampasika) ny fanafihana tamin'ny fanadihadiana nataon’ izy ireo momba ny rindrambaiko mpisompatra BlackEnergy, voalaza fa nampiasaina tamin'ny fanafihana.
Tamin'ny 18 Janoary, namoaka fampitandremana ny Ekipa Mpamaha ny Olana Ara-solosainan'ny fanjakana ao Okraina (CERT-UA) amin'ny mety isian'ny fanafihana bebe kokoa mifandraika amin'ny BlackEnergy, ary miantso ireo mpitantana ny rafitra mba hitandrina hatrany manoloana ireo famantarana mampiahiahy ao amin'ny tahirin-kevitra sy ny fifamoivoizan'ny aterineto.